Venezoela: Misalasala ny amin’ny antony nahafatesan’i Bolivar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2019 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Isaky ny 17 Desambra, Mankalaza ny fitsingerenan'ny nahafatesany ny firenena rehetra izay mihevitra an'i Símon Bolívar ho toy ny maheron'ny fireneny . Ao Venezoela, mametraka sainam-pirenena eo ivelan'ny varavarany ny olona, ​​raha mitondra voninkazo any amin'ny sarivongan'ny Mpanafaka (Liberator) any amin'ny kianja Bolívar tsirairay ireo vondrona Bolivariana manam-pahaizana sy ny akademika. Tamin'ny volana Desambra 2007 lasa teo, takona ny fahatsiarovana ny tsingerintaona raha nanomboka nanahy ny tamin'ny nahafatesan'i Bolívar ny filoha Hugo Chávez, izay noheveriny fa voan'ny raboka. Na dia izany aza, nilaza i Chávez fa fihetsika fanapoizinana izany ary nandidy ny hanaovana fanadihadiana momba izany izy. Herintaona taty aoriana, naneho hevitra momba ny tsingerintaona manantantara mikasika ny nahafatesan'i Bolívar sy ny fiovana hita tamin'ny bokin-tantara ireo bilaogera.
Felix Tapia manoratra momba ny fomba hamantarana ny antony nahafatesany [es] :
Namerina namoaka lahatsoratra avy amin'ny gazety momba ilay tranga ny bilaogy Megaresistencia [es], izay niteraka fanehoan-kevitra mahaliana isan-karazany, anisan'izany ireo izay sahiran-tsaina fa lasa lohahevitra amin'ny adihevitra izany ary ny hafa izay liana amin'ny misitery mety hisian'ny fahafatesana hafa.
Andrés avy ao amin'ny Venezuelan Compass [es] manoratra ny fiankinan-dohan'ny governemanta mistikan'i Bolivar ary nahoana no zava-dehibe amin'izy ireo izany: